Red Psycho Llama Eco Hostel ao Miraflores, Lima
The Red Psycho Llama Eco Hostel ao Miraflores, Lima
Reduced, Reuse, Psycho Red
Toerana fandraisam-bahiny ao amin'ny Red Psycho Llama Hostel ao Miraflores, Lima. Tony Dunnell
Voalohany, ny anarana: Red Psycho Llama. Mahatsiaro azo antoka, fa ... fa nahoana?
Eny ary, misy antony. Andian-dahatsoratra eo amin'ilay maitso maitso maitso: hampihenana, hampiasaina, hamerenana. Recycle = redpyscho. Lazao izany rehetra izany ary mahagaga izany.
Ny Red Psycho Llama Eco Hostel, araka ny soso-kevitra, dia mifantoka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana rehefa milalao mpizahatany amin'ny mpandeha any Miraflores, Lima. Ny trano fonenana Eco dia miposaka any Peru ary na aiza na aiza aleha androany ary - aoka ho marina isika - Indraindray ny zavatra ekolojika dia mihoatra lavitra noho ny zavatra manan-danja. Ao amin'ny Red Psycho anefa, tsy misy ny fanerena hanohanana henjana sy faniriana marina hampiroborobo ny fanodinana.
Avy amin'ny anaran'ny efitrano (Glass, Paper, Plastika sns.) Sy ny endriny mifanaraka amin'ny fanodinana azy, ho an'ny vokatra varotra malalaka amin'ny famarotana sy ny fametrahana angovo angovo, mazava tsara fa ity hostel ity dia tsy ampy raha manome toky ny "Eco" tag . Tsy afaka mahazo karatra fandraisam-bahiny amin'ny fandraisana ianao noho ny filozofia "mieritreritra alohan'ny fanontana". Rariny kosa.
Mazava ho azy fa ho very ny fanosihan'ny tontolo iainana rehetra eto an-tokantrano raha toa ka mihitsoka ny trano fonenana. Saingy tsy misy olana toy izany manohintohina ny Red Psycho: toerana tsara tarehy, madio, malefaka ary tsara izy fa tsy ho faly ny mijanona ao an-trano - raha afaka manamarina ny vidiny izy ireo ...
Miaraka amin'ny fandriana iray ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny iray miisa dimy izay mitentina S / .56 be dia be, ny ankamaroan'ny mpanao fivarotam-piaramanidina goavam-be dia ho afa-maina amin'ny alina ao amin'ny Red Psycho. Raha ny marina, tsy sarotra ny mahita trano fatorana ao Lima, eny fa na dia ao afovoan'i Miraflores aza, ho an'ny antsasak'izany vidin'ny (Friend's House, ohatra). Ny latsakemboka dia mitsambikina avo kokoa ho an'ny efitra fandraisam-bahiny efatra (S / .80) ary haingana dia haingana amin'ny hotely vidin'ny efitra manokana (S / .180).
Noho izany, inona no mahazo ny volanao?
Efitra tao amin'ny trano fivarotana Pyscho mena
Tranom-bahiny kara-pandrosoana ao amin'ny Red Psycho Llama Hostel, voaravaka amin'ny lolo vita amin'ny tanimanga vita amin'ny fitaovana voaaro. Tony Dunnell
Ny efitrano ao amin'ny Red Psycho Llama Eco Hostel dia maivana, mahavariana ary manintona. Ny ankamaroan'ny fanorenana sy ny sasany amin'ireo fitaovana dia vita amin'ny fitaovana ampiasaina; Ny fandriam-bidy dia mavesatra sy mendrika; Ny efitra fandroana (ny sasany nozaraina, ny sasany avy) dia maoderina sy madio; ary ny orana dia mafana sy matanjaka.
Ny efitrano tsirairay dia manana ny toetrany manokana, voafaritra amin'ny ampahany amin'ny fitaovana azo havaozina araka izay nanononana azy. Ny efitrano fanambadiana, fantatra amin'ny anarana hoe Vidrio, dia voaravaka amin'ny singa fitahirizam-bokatra, anisan'izany ny lokon'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy; Lata, mandritra izany fotoana izany, dia efitrano fandriam-pahalemana dimy-drakitra misy sary vita amin'ny hazo vita amin'ny vilany.
Ankoatra ny mahatsikaiky, mahatsikaiky sy mahatsapa-tsara ny manome ireo singa miverimberina, dia tsara kokoa ny efitrano fa tsy miavaka amin'ireo mari-pandrefesana mpivarotena Miraflores. Ny tena mametraka an'i Red Psycho manokana, ary inona no mahatonga ny vidiny avo kokoa azo ekena, dia ny faritra misy ny trano fialamboly, ny tontalin'ny serivisy sy ny toerana ...
Llamas, Couches vita amin'ny hoditra sy fitoeran-jiro plastika
Fijerin'ny Miraflores avy eny an-tampon'ny Red Psycho Llama Hostel. Tony Dunnell
Ny faritra mifandraika ao amin'ny Red Psycho Hostel dia anisan'ny fanasana lehibe indrindra hitako tany Miraflores. Ny efitra fandraisam-bahinin'ny trano fandraisam-bahiny dia mahafinaritra sy funky, miaraka amin'ny lambam-pandriana, tavoahangy plastika vita amin'ny tavoahangy plastika, ary llamas vitsivitsy manipika manodidina ny efitrano. Dia misy ny toerana fandriam-bahiny, miaraka amin'ny latabatra sy seza vitsivitsy ary sehatra sehatra lehibe misy koviana izay ahafahan'ny vahiny mitsangatsangana sy milalao gitara. Ny faritra fanatanjaham-bozaka kolontsaina dia faritra iray hafa kely mafana mba hikolokoloana, mahandro ary mamorona namana vaovao.
Na tsara kokoa aza ny teratany eny ambony tafo. Ity no karazana habaka tsy ahafahan'ny mpanamory mpanohitra any Lima manohitra: fisian'ny orinasa avo be ao anatin'i Lima tsy misy mponina, toeram-pambolena voajanahary sy sary sokitra marobe, miaraka amin'ny sarin'ireo trano ety ambany, ary hatramin'ny tilikambo matevina amin'ny seranana mirakitra an'i Miraflores fikambanana. Ity no toerana hipetrahana sy hahazoana filôzôfika, na hipetraka sy haka namana amin'ny labiera vitsivitsy na tavoahangy pisco (ary avy eo mametraha ny tavoahanginao ao anaty fitoeram-bary).
Fanompoana mahafinaritra ao am-pon'ny Miraflores
Fijerena hafa avy amin'ny faritra amoron-dranomasina ao amin'ny Red Psycho Llama Hostel. Tony Dunnell
Raha eo amin'ny toerana misy azy, ny Red Psycho Llama dia tsara indrindra raha te ho eo akaikin'ny hetsika ao afovoan'i Miraflores ianao. Izy io dia vato roa avaratr'i Parque Kennedy ary mora lavitra ny kianja, klioba, trano fisakafoanana, cafés ary sinema iray. Ho lasa toerana ratsy eo amin'ny valan-javaboary ianao raha te ho eo akaikin'ny ony amoron-dranomasina sy ny ranomasina, nefa dia mandeha an-tongotra 10 minitra fotsiny ny mandeha midina mankany Larcomar , Parque del Amor , paragliding sy ny mpizaha tany amoron-dranomasina hafa.
Na dia eo akaikin'ny fanararaotana goavana Óvalo de Miraflores sy Av. Arequipa, Red Psycho dia maimaim-poana amin'ny tabataba misedra ny fifamoivoizana, izay nesoriny teo amin'ny arabe iray mangina, Narciso de la Colina. Io toerana io dia azo antoka, noho izany dia tokony hahatsapa ho azo antoka ianao na dia amin'ny alina aza.
Raha manana olana ianao, dia afaka miantehitra amin'ny tompon'andraikitra isan-tokantrano hanome anao ny torohevitra sy ny fanampiana ilainao. Ny mpikambana ao amin'ny bilingue dia matihanina sy mikarakara - ny fiahiany ny tontolo iainana dia mifanaraka amin'ny fiahian'izy ireo ny vahiny. Ho sambany izy ireo handamina taxi ho anao, na hanome toro-hevitra momba ny fisehoana an-tsarintany eo akaikiny sy ny safidy fitaterana manodidina ny tanàna.
Ny sakafo maraina ao amin'ny Red Psycho dia tsara fa tsy miavaka - mahaliana kokoa noho ny mofo sy ny marika amin'ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny. Azonao atao ny mamerina ny tavoahangin-drano ho an'ny S / .1 amin'ny fampiasana ny rano sotroina, izay tsara tarehy. Ny fifandraisana Wi-Fi dia toa tsara avokoa ny trano fonenana, na eny ambony tafo.
Red Psycho Llama Review Round-Up sy Hostel Information
Asaivo eo akaikin'ny sehatry ny lakozia ao amin'ny Red Psycho Hostel. Tony Dunnell
Ny mpiasa sy ny sehatra iraisampirenena tsara indrindra dia manampy ny Red Psycho Llama Eco Hostel mipoitra ao amin'ny tsenan'ny mpivarotra Miraflores, ary ny zava-maitso dia zavatra manintona ho an'ny olona te-hiara-hiasa amin'ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana araka izay tratra.
Red Psycho dia tsy ho vaha-olana ho an'ny mpanamboatra fivarotam-piadiana madinidinika fotsiny noho ireo taham-pivoarana ambony, ary azo antoka fa hahita safidy mora kokoa amin'ny Miraflores ianao. Fa raha faly kosa mandany vola bebe kokoa ho an'ny trano fialam-boly ianao, mahatsiaro ho manirery, mahafinaritra sy mahafinaritra, dia tsy hanenenanao ny fampiasam-bola.
Red Psycho Contact Details, Taratasy ary Fampahalalana hafa
Adiresy: Calle Narciso de la Colina 183 (eo afovoan'i Arequipa sy Av. Petit Thouars), Miraflores, Lima
Taratasy (Per Person)
Efitra fandriana dimy natoraly: S / .56
Efitrano fandoroana vilia efatra: S / .80
Tranom-batan-damba efatra kambana: S / .80
Private room: S / .180
Tahaka ny mahazatra ao amin'ny indostrian'ny fizahantany, ny mpanoratra dia nomena asa fanompoana maimaim-poana ho an'ny tatitra miverimberina. Na dia tsy nisy fiantraikany tamin'ity fanadihadiana ity aza, mino an'i About.com ny famoahana tanteraka ny fifandonana mahaliana rehetra. Ho fampahalalana misimisy kokoa, jereo ny Politika etika.
Casa Garcia Alvarado ao Lima
Cinemas any Lima, Peroa
El Malecón ao Miraflores, Lima
Zavatra atao atao any Lima miaraka amin'ny ankizy
Ny Torolàlana Farany Ho an'ny Distilleries Ao Atlanta
Inona no hividianana an'i Mexico?
Nosy Los Bay Atsimo-Andrefana - Fialantsasatry ny herinandro
Tetik'ady famafazana divay
Ny Torolalana ho an'ny USA Road Trip Amerikana
Toerana tsara indrindra any Normandia
Nitsidika an'i Texas tamin'ny Oktobra
Fipoahana any Spring Spring
Ny Lanitra 7 tsara indrindra mba hividy amin'ny 2018
Sary mena mena